Madaxweyne Laftagareen oo ka hadlay geeridii Maxamed Sheekh Madoobe. - Iftiin FM
Madaxweyne Laftagareen oo ka hadlay geeridii Maxamed Sheekh Madoobe.
by Iftiin FM Reporter August 27, 2021
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa wax laga naxo ku tilmaamay geeridii Alle ha u naxariistee Jeneraal Maxamed Sheekh Madoobe oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Dagaal ka socdo Guriceel gobolka Galgaduud.
Madaxweyne Laftagareen oo tacsi uu diray qoyska, qaraabada iyo Ummadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in Marxuumku uu muddo u soo adeegayey Qaranka Soomaaliyed iyo doorkii uu ku lahaa difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isaga oo burbarkii kaddib door ka soo qaatay nabadeynta iyo dowlad dhiska dalka.
Nin ku hubaysan qaanso iyo leeb oo shan qof ku dilay gudaha dalka Norwey.
Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa Marxuumka Alle uga baryay in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyska, qaraabada iyo guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodey.
Dowladda Pakistan oo ka hadashay masaajidkii la bur buriyey .
Tirada Dhimashada iyo dhaawacyada Kabul oo kor uu kacday .